Free Thinker: ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်များ၏ အရည်အသွေး အပိုင်း (၁)
(၁) နိုင်ငံသားကောင်းတစ်ယောက်၏ တာဝန်
(၂) ခဲယဉ်းလှသော အလုပ်တစ်ခု
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်များမှ အမှားများကိုသော်လည်းကောင်း၊ စာမေးပွဲမေးခွန်းမှ အမှားများကိုသော် လည်းကောင်း မကြာခဏ တွေ့နေရပါသည်။ ဤအကြောင်း ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်၌ အော်ကြဟစ်ကြသည့်တိုင် ဘာတစ်ခုမှ တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာတာ မတွေ့မိသေးပါ။ ပိုလို့ပင် ဆိုးလာပါသေးသည်။ ဤသည်မှာ အဘယ်ကြောင့်ပါနည်း။
ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်ဟူသည် အုပ်ရေ တစ်ထောင်လောက် ထုတ်ရတာမဟုတ်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှ ကျောင်းသားများအတွက် ထုတ်ရတာဖြစ်၏။ နောက်ပြီး အပျော်တမ်းစာအုပ်လည်း မဟုတ်။ သည်စာအုပ်ပါစာများကို လေ့လာသင်ယူကာ မိမိတို့ ဘဝ တစ်လျှောက်လုံး ရည်ညွှန်းရတာ ဖြစ်၏။ ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်ဟူသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သိက္ခာလည်း ဖြစ်၏။ ကျောင်းသုံး ဖတ်စာအုပ်များ အမှားမှားအယွင်းယွင်းဖြစ်နေလျှင် နိုင်ငံလည်းသိက္ခာကျသည်။ ကျောင်းစာအုပ်ကလေး တစ်ခုကိုမှ နိုင်နိုင်နင်းနင်း မစီမံ၊ မခန့်ခွဲတတ်သူများအနေနှင့် နိုင်ငံတစ်ခုလုံးရှိ ကျောင်းများကို မည်ကဲ့သို့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါမည်နည်း။
ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်များတွင် စိတ်ကူးယဉ် အရေးအသားများထက် အချက်အလက်ပိုင်းက ပိုများသည်။ မြန်မာစာနှင့် အင်္ဂလိပ်စာမှ ဝတ္ထု၊ ပုံပြင်များလောက်သာ စိတ်ကူးယဉ် အရေးအသားပါပြီး ကျန် ပထဝီ၊ သမိုင်း၊ သိပ္ပံ၊ သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ၊ ဘောဂဗေဒ စသည့်ဘာသာရပ်အားလုံးမှာ အချက်အလက်တွေချည်း ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ထိုအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးမှာ ကျောင်းသုံးစာအုပ်များအတွက် အသက်တမျှ အရေးကြီးလှသည်။
ကျောင်းသုံးစာအုပ်များ၏ အရည်အသွေးဆိုရာတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးနှင့် အတွင်းစာသားဆိုင်ရာအရည်အသွေးဟု နှစ်ပိုင်းခွဲနိုင်၏။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးတွင် စာအုပ်မှ စာရွက်သားများ၏ အရည်အသွေး၊ ရိုက်နှိပ်ထားသည့် စာသားများ၏ အရည်အသွေး၊ မင်ကျမင်န၊ ပုံများ သေသပ်၊ လှပ၊ ကောင်းမွန်၊ ပြတ်သားခြင်း၊ စာမျက်နှာများ ပြည့်စုံခြင်း၊ စာလုံးများ မှုန်ဝါးမနေခြင်း၊ ပြတ်သား ကြည်လင်ခြင်း၊ စာလုံးများနှစ်ထပ် ဖြစ်မနေခြင်း၊ စာလုံးများ မည်းသည့်နေရာကမည်း မှိန်သည့်နေရာကမှိန် စသည်တို့မှ ကင်းဝေးခြင်း၊ စာရွက်လွတ်များမပါခြင်း၊ စာမျက်နှာများ ထပ်မနေခြင်း၊ စာမျက်နှာများ ကျော်မသွားခြင်း၊ စာအုပ်ချုပ်ရာတွင် သေသပ်လှပခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်၏။
Ø စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ မှန်ကန်မှု၊ စာလုံးများ အဖြတ်အတောက်မှန်ကန်မှု
Ø အသုံးအနှုန်းမှန်ကန်မှု၊ ဝါကျအထားအသို မှန်ကန်မှု
Ø ဖတ်လိုက်လျှင် ရှင်းလင်းစွာ နားလည်နိုင်စွမ်းရှိမှု
Ø အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ မှန်ကန်မှု
Ø ကဗျာဖြစ်လျှင် ကဗျာပါစာသားများ၊ အဖြတ်အတောက်များမှန်ကန်မှု၊ မူရင်းကဗျာနှင့် တသဝေမတိမ်း တူညီမှု
Ø စာအုပ်တစ်ခုခုမှ ယူထားသည်ဆိုလျှင် ထိုကိုးကားထားသည့် စာအုပ်မှစာများနှင့် တသဝေမတိမ်း တူညီမှု
Ø သမိုင်းဘာသာရပ်တွင် လူနာမည်များ၊ မြို့၊ နိုင်ငံနာမည်များ၊ ခုနှစ်သက္ကရာဇ်များ မှန်ကန်မှု
Ø ပထဝီဆိုင်ရာ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ မြေပုံများ၊ ရုပ်ပုံများမှန်ကန်မှု
Ø ပထဝီနှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ခေတ်နှင့်တပြေးညီ ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်နိုင်မှု
Ø ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အခေါ်အဝေါ်နှင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှု
Ø သင်္ချာဆိုလျှင် တွက်နည်း၊ ပုစ္ဆာနှင့် အဖြေများမှန်ကန်မှု၊ စံပြပုစ္ဆာနှင့် အဖြေများ မှန်ကန်မှု
ပထမဆုံး အရေးကြီးသည်မှာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံများ မှန်ကန်ရေး ဖြစ်၏။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံဟု ဆိုရာတွင် စာလုံးတိုင်း စာလုံးတိုင်းကို ဆိုလို၏။ ကျောင်းသင်ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ဖြစ်သည့်အတွက် စာတစ်လုံးမှ မမှားစေရ၊ မလွဲစေရ။ အလွန်ဂရုစိုက်ရန် လို၏။ ထို့ကြောင့် စာအုပ်များကို စစ်ဆေးသူများအနေနှင့် လက်ရှိတရားဝင်အသုံးပြုနေသော မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းကို ကိုင်ကာ စာတစ်လုံးချင်း စီကို ကျကျနန စစ်ဆေးရန် အရေးကြီး၏။
ဒုတိယအရေးကြီးသည်မှာ ပြဋ္ဌာန်းစာများသည် မူရင်းစာများနှင့် လုံးဝကွက်တိ တူညီနေစေရေး ဖြစ်၏။ သို့အတွက် ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များကို စစ်ဆေးမည့်သူသည် စာရေးဆရာ၏ မူရင်းစာအုပ်များနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရမည် ဖြစ်၏။ စစ်သမှ စာတစ်လုံးချင်းစီကို တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးရမည်။ မူရင်းစာထဲတွင် မပါသည့်စာလုံးများ ပါမလာစေရေး၊ မူရင်းစာအုပ်မှ စာလုံးများ ကျကျန်မနေစေရေးသည် အလွန် အရေးကြီးလှ၏။ မြန်မာစာသည် လုံးကောက် အနက်အဓိပ္ပာယ်ထွက်သောစာ ဖြစ်လေရာ စာတစ်လုံးကျကျန်ခဲ့ သို့မဟုတ် ပိုသွားသည်နှင့် မူရင်းအဓိပ္ပာယ်မှ များစွာလွဲချော်သွားနိုင်၏။
တတိယအရေးကြီးသည်မှာ အဖြတ်အတောက်များ မှန်ကန်ရေး ဖြစ်၏။ အင်္ဂလိပ်စာတွင် စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီကို ဖြတ်သွားသည် ဖြစ်ရာ အဖြတ်အတောက်မှားမှာ မပူရ။ မှားစရာကို မရှိ။ သို့သော် မြန်မာစာတွင်မူ အဖြတ်အတောက်မှားလျှင် အဓိပ္ပာယ်ပါလွဲသည်။ ထို့ကြောင့် အဖြတ်အတောက်များ မှန်ကန်စေရေး အရေးကြီး၏။ ဤသည့်ကိစ္စမှာ အထက်ဆုံးအရာရှိ၏ တာဝန်ဖြစ်၏။ အောက်ဘက်က မတော်တဆမှားလာခဲ့သည်များကို အထက်ဆုံးအရာရှိက မျက်စိဒေါက်ထောက် ကြည့်ရမည်။ မြန်စရာမလို။ အုပ်ရေ သိန်းနှင့်ချီကာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဖြန့်မည့်စာအုပ်များ ဖြစ်သည့်အတွက် မှန်ရန်သာ အရေးကြီးလေသည်။
နောက်တစ်ခုမှာ အနက်အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်များ ဖြစ်၏။ ဤစာအုပ်မှာ သာမန် မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်၊ ဝတ္ထုစာအုပ်တစ်အုပ် မဟုတ်။ ကျောင်းသုံးစာအုပ်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ မှန်ကန်ရေးမှာ အလွန်အရေးကြီးလှ၏။ ယခုမှ ပညာရင်နို့ သောက်စို့ခါစ ကလေးများကို အမှားကြီး သင်မပေးမိစေရေးမှာ ထိုပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များ မှန်ကန်ရေးလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်း သတိထားရပါမည်။
နောက်တစ်ခုမှာ စံပြအဖြေများ မှားမပေးမိစေရေး ဖြစ်၏။ ကလေးများကို မှားသင်ပေးလိုက်လျှင် တစ်သက်လုံး မှားသွားလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကလေးများ၏ စိတ်မှာ ပကတိဖြူစင်နေသော စိတ်ဖြစ်၍ အရောင်ဆိုးရလွယ်သည်။ ထိုအရောင်သည် တစ်သက်လုံးစွဲနေတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် စ သင်ကတည်းက အမှန်ကို သင်ပေးရေး အရေးကြီးခြင်း ဖြစ်၏။ စံပြအဖြေများ မှန်ကန်စေရေး မှာ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ဆရာများ၏ အရာဖြစ်၏။
နောက်တစ်ခုမှာ ဖော်ပြထားသော ပုံများနှင့်စာသား ကိုက်ညီစေရေး၊ ပုံများ မှန်ကန်စေရေး ဖြစ်၏။ အချက်အလက်များ ဖော်ပြမည် ဆိုပါကလည်း ထိုအချက်အလက်များကို အခိုင်မာဆုံးနေရာ၊ မူလနေရာမှသာ ရယူရပါမည်။ မသေချာသည့် သို့မဟုတ် အငြင်းပွား ဖွယ်ရာအချက်များ ပါလာပါက တာဝန်ရှိသည့် ဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ကာ အတည်ပြုချက် ရယူရပါမည်။
အရေးကြီးသည့် နောက်တစ်ချက်ကို ပြပါဆိုလျှင် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများဖြစ်၏။ ထိုကိစ္စများသည် အလွန် အကဲဆတ်သည့်ကိစ္စဖြစ်၍ ဘာသာတစ်ခု၊ လူမျိုးတစ်မျိုးကို ထိခိုက်စော်ကားသည့် အသုံးအနှုန်းများ၊၊ အမုန်းပွားစေမည့် အသုံးအနှုန်းများမပါစေရေးကို မှန်ဘီလူးနှင့်ရှာကာ စစ်ထုတ်ပစ်ရန် လို၏။
နောက်အရေးကြီးသည့်အချက်ကို ထောက်ပြရလျှင် မူလတန်းကလေးငယ်များအတွက် ပြင်ဆင်ထားသောစာအုပ်မှာ ရုပ်ပုံများများ၊ စာနည်းနည်းနှင့် ဖြစ်သင့်၏။ ယခု ကျောင်းဖတ်စာအုပ်များကို ကြည့်လိုက်လျှင် အနည်းငယ်မျှ ဆွဲဆောင်မှုမရှိပါ။ အလွန် ပျင်းစရာ ကောင်းလှသော စာအုပ်အပြင်အဆင် ဖြစ်လေသည်။ ဥပမာပြရလျှင် ပဉ္စမတန်း သမိုင်းစာအုပ် ဖြစ်၏။ ပါလာသည့် ပုံများမှာလည်း လကွယ်ည သန်းခေါင်ယံ၌ ကတ္တရာလမ်းပေါ်တွင် ကုလားမကြီးတစ်ယောက် ထိုင်နေသကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ ဤပုံများကို ကလေးငယ်များ မည်သည့်နည်းနှင့်မှ စိတ်ဝင်စားမည် မဟုတ်။
ပုံများမှာ ပန်းချီသရုပ်ဖော်၊ ရောင်စုံပုံများဖြစ်သင့်၏။ စာကို တတ်နိုင်သမျှလျှော့ကာ ကာတွန်းစာအုပ်တစ်အုပ်ကဲ့သို့ ပြင်ဆင်သင့်ပါသည်။ ပုံလှလှပပကလေးများနှင့် ဖတ်ချင့်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ပြင်ထားမှ ကလေးများ စိတ်ဝင်စားလာမည်။ ဒါဘာတွေလဲဟု သိချင်လာမည်။ ယခု ကျောင်းစာအုပ်များမှာမူ ကလေးမပြောနှင့်၊ လူကြီးများကိုပင် ဆွဲဆောင်မှုမရှိပါ။
(၄) ဖတ်စာအုပ်များမှ အမှားတချို့
ဤတွင် ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များမှ အမှားတချို့ကို ကျွန်တော် ထောက်ပြထားပါသည်။ သို့တိုင် ဖတ်စာအုပ်အားလုံးကို ရှာဖွေ ထောက်ပြဘို့ရာ လွယ်ကူသည့် အလုပ်မဟုတ်ပါ။ သည်ကိစ္စမှာ အလွန်တာဝန်ကြီးလှ၏။ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်အားလုံးကို စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်ရှာဖွေပြီး အမှားအားလုံးကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်မှာလည်း ကျွန်တော့်အလုပ်မဟုတ်ပါ။ အမှားတချို့ ပြနိုင်လျှင်ပင် လုံလောက်ပါပြီ။ တာဝန်ရှိသူများ အနေနှင့်မူ အစိုးရမူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း၊ တက္ကသိုလ်များမှ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်အားလုံးကို ပြန်လည်စိစစ်ကာ အမှား အားလုံးကို ရှာဖွေရပါမည်။ တွေ့သမျှ အမှားအားလုံးကို စာရင်းလုပ်ကာ နောက်စာအုပ်များ ရိုက်နှိပ်သည့်အခါ အမှားမပါရလေအောင် အချိန်မီ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရပါမည်။
ယခု ကျွန်တော် အောက်ပါ ဖတ်စာအုပ်များမှ အမှားများကို ထောက်ပြထားပါသည်။
၄၊ ၁။ ၂ဝ၁၇၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ်၊ ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပဉ္စမတန်း၊ မြန်မာဖတ်စာ မှ အမှားများ
အမောင် ဤခွက်သည် အဖိုးများစွာ
ကူးတို့ = ရေလမ်းတွင် - - - - လှေသင်္ဘောများ ဆိုက်ကပ်ရန်နေရာ
ကူးတို့ = ရေလမ်းတွင် - - - - ပို့ဆောင်ပေးသည့် လှေ၊ သမ္ဗာန်၊ သင်္ဘော
ကူးတို့သည် နေရာမဟုတ်။ ယာဉ်တစ်မျိုးကို ရည်ညွှန်းသည်။
မမြရင်ကို အငြိမ့်ကသည့်ခေတ်က အသံချဲ့စက်များ မပေါ်သေးပါ
မမြရင်တို့ အငြိမ့်ကသည့်ခေတ်က အသံချဲ့စက်များ မပေါ်သေးပါ။
၁။ ကို နှင့် တို့ - အသုံးလွဲနေသည်။
ကြိမ်နှင့် သံနှင့်ရိုက်၍ ခံထားသည်။
ကြိမ်ကို သံနှင့်ရိုက်၍ ခံထားသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆယ် လောက်မှ စ၍
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း တစ်ရာကျော် လောက်မှ စ၍
အိုးစည် = . . . . ဗုံတို
အိုးစည် = . . . . ဗုံရှည်
ဤခေါင်းလောင်းကြီး၏ အပြင်ဘက်၌ ၁၆ ပေနှင့် ၃ လက်မရှိပြီး . .
ဤတွင် ၁၆ ပေနှင့် ၃ လက်မမှာ အဝန်းဖြစ်သလော၊ အမြင့်ဖြစ်သလော သေသေချာချာ ဖော်ပြမထားသဖြင့် မည်သည့်အတိုင်းအတာမှန်း မသိရပါ။
အရပ်ကို တ ပြန်သနည်း။
စကားထာများကို တင်စားမှုများ ပါနေသဖြင့် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းပါသည်။
စကားထာများ၌ (သို့မဟုတ်) စကားထာများမှာ (သို့မဟုတ်) စကားထာများသည် တင်စားမှုများ ပါနေ သဖြင့် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းပါ သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မီးလောင်လွယ်မည့် ပစ္စည်းများ မထားရှိသင့်ပါ။
မီးအသုံးပြုနေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မီးလောင်လွယ်သည့် ပစ္စည်းများ မထားသင့်ပါ။
ရပ်ကွက်အတွင်း အိမ်နီးချင်း မီးဘေး အန္တရာယ်ကို သတိပေး . . .
ရပ်ကွက်အတွင်း အိမ်နီးချင်း အချင်းချင်း မီးဘေး အန္တရာယ်ကို သတိပေး . . .
ကျေးရွာများတွင် မီးချိတ်၊ မီးကပ်၊ သဲပုံး၊ ရေပုံးများ
ခေတ်လည်းမမီ၊ အသုံးလည်းမတည့်သည့် ဤသတင်းအချက်အလက်များကို မထည့် သင့်ပါ။ "မီးသတ်ဘူးဆောင်ထားသင့်သည်" ဟု ပြောင်းလဲထည့်သွင်းသင့်သည်။
၁။ ရွဲကုန်သည်နှစ်ဦး - တွင် "သေရိဝမည်သော မိုက်သောရွဲကုန်သည်" - ဟု အမည်ကိုပါထည့်သွင်း ဖော်ပြထား၏။ ဤကဲ့သို့ အမည်ကိုထည့်လျှင် ထိုရွဲကုန်သည်ပုံပြင်ကို မည်သည့်နေရာ က ယူထားသည်ဟု ပြဆိုထားရမည် ဖြစ်သလို လိမ္မာသောရွဲကုန်သည် နေရာတွင်လည်း ဘုရားလောင်းရွဲကုန်သည်ဟု ဖော်ပြမှ အမှန်ဖြစ်မည်။ ဘုရားလောင်းရွဲကုန်သည်ဟု မဖော်ပြလိုပါက သေရိဝဟူသည့် အမည်ကိုဖြုတ်ပြီး မိုက်သောရွဲကုန်သည်ဟုသာ သုံးသင့်ပါသည်။
၄၊ ၂။ ၂ဝ၁၇၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ်၊ ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပဉ္စမတန်း၊ ပထဝီဝင်ဖတ်စာမှ အမှားများ
ပုံ (၁-၃) လောင်ဂျီကျုများပြပုံ
အပေါ်ပုံအလယ်စက်ဝိုင်း၌ ၁၈ဝ ဒီဂရီ နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်မှာ ၉ဝ ဒီဂရီ ဟု ပြထားသည်။
ပုံ (၁-၄) ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီးများ နှင့် သမုဒ္ဒရာများပြပုံ
အီကွေတာနေရာမှားနေသည်။ သုည ဒီဂရီမှ ဖြတ်ရမည့်အစား မြောက် လတ္တီကျု ၁၇ ဒီဂရီခန့်မှ ဖြတ်ထား သည်။ ထို့ကြောင့် တောင်ယဉ်စွန်း တန်းနှင့် မြောက်ယဉ်စွန်းတန်း နေရာ များလည်း မှားသည်။
အီကွေတာသည် သုညဒီဂရီတွင် ဖြတ်ရ မည်။
ကမ္ဘာ့မြေပုံများနှင့် ပြန်လည် ချိန်ကိုက်သင့် သည်။
ပုံ (၂-၂) မြန်မာနိုင်ငံနှင့်
လောနိုင်ငံနေရာတွင် ထိုင်း ဟု ရေးထိုး ထားပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနေရာတွင် လော ဟု ရေးထိုးထားသည်။
မြေပုံပေါ်တွင် နိုင်ငံနေရာအမှန် ဖြစ်သင့် သည်။
မြေပုံမှာ သေးပြီးဝါးနေသဖြင့် ပြတ်ပြတ် သားသား မမြင်ရပါ။ ပုံကို သည့်ထက်ပိုကြီး သင့်သည်။
ဧရာဝတီ၊ ချင်းတွင်း၊ စစ်တောင်း
ဧရာဝတီမြစ်အရှည် = ၁၂၃၈ မိုင်
ချင်းတွင်းမြစ်အရှည် = ၆၉၁ မိုင်
စစ်တောင်းမြစ်အရှည် = ၁၈၆ မိုင်
Wikipedia တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ -
ဧရာဝတီမြစ်အရှည် = ၁၃၇၃ မိုင်
ချင်းတွင်းမြစ်အရှည် = ၇၅ဝ မိုင်
စစ်တောင်းမြစ်အရှည် = ၂၆ဝ မိုင်
မြစ်အရှည်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးသင့်ပါ သည်။
တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးရေဖြူမြို့ နယ်တွင်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေဖြူမြို့နယ် တွင်
ပုံ (၃-၁) ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံပုံ
ယခုအခါ တောင်ဗီယက်နမ်၊ မြောက်ဗီယက်နမ်ဟု မရှိတော့ပါ။
လူဦးရေ၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ခမာ လူမျိုးများဖြစ်ပြီး
Wikipedia တွင် - ခမာလူမျိုးမှာ ၇၉ ရာခိုင်နှုန်း ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
၄၊ ၃။ ၂ဝ၁၇၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ်၊ ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပဉ္စမတန်း၊ သမိုင်းစာအုပ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စနစ်တကျ တည်ထောင်ခဲ့သော
မြန်မာနိုင်ငံကို စနစ်တကျ တည်ထောင်ခဲ့ သော
'တွင်' နှင့် 'ကို' အသုံးမှား
စနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်သော ရှေး ဟောင်း လူနေမှု အဆောက်အအုံပေါ် တွင် အခြေပြု၍ ပုဂံနိုင်ငံ ပေါ်ပေါက် လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဤကဲ့သို့သော စာကြောင်းမျိုးကို ပဉ္စမတန်း ကလေးငယ်တို့အဖို့ နားလည်ရန် မလွယ်ပါ။ ပိုမို ရှင်းလင်းလွယ်ကူသော ဝါကျများဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပေးသင့်ပါသည်။
နားမလည်သည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ကလေးငယ်များ စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ပဒေသရာဇ်ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ် သည့်အတွက်
ဘုရင်ခံများခန့်ထား အုပ်ချုပ်စေ သည်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သော သီဟိုဠ်၊ မလေး
အလွန်ဝေးကွာလှသောအရပ်တွင်ရှိသည့် သီဟိုဠ်နှင့် မလေးကို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဟု ခေါ်နိုင်လိမ့်မည် မထင်ပါ။
ဟိန္ဒူနတ် ဘုရားကိုးကွယ်မှုလည်း ရှိသည်။
ဟိန္ဒူနတ်ဘုရား ကိုးကွယ်မှုလည်း ရှိသည်။
ပုဂံခေတ်ယဉ်ကျေးမှုသည် မွန်၊ ပျူ၊ ရှမ်းစသည့် လူမျိုးနွယ်တို့၏ ယဉ်ကျေးမှု တွင် မြန်မာလူမျိုးနွယ်တို့၏ စရိုက်၊ အစဉ်အလာနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ခိုင်မာ သော ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ဤစာကြောင်း၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ပဉ္စမတန်းတက်နေသည့် ကျောင်းသားအရွယ် ကလေး ငယ်တို့အဖို့ နားလည်နိုင်မည်မထင်ပါ။ ကလေးများ နားမလည်နိုင်သည့် အကြောင်းအရာကို သင်ခြင်းသည် အချိန်ကုန်၊ လူပမ်းရုံမျှဖြစ်ပြီး မည်သည့်အကျိုးမှ မရှိနိုင်ပါ။
Vat Chet You
၄၊ ၄။ ၂ဝ၁၇၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ်၊ ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပဉ္စမတန်း၊ အထွေထွေသိပ္ပံစာအုပ်
ကီလိုမီတာ ၇ဝဝ အထိ ထူသည်။
ကီလို တစ်သောင်းခန့်ထိ ထူပါသည်။
နောက်ဆုံးလွှာဖြစ်သော Exosphere သည် ကီလိုမီတာ ၇ဝဝ မှ စကာ ကီလိုမီတာ ၁ဝဝဝဝ လောက်ထိ ဖြစ်၏။
လေထုတွင် အလွှာလေးလွှာပါဝင် သည်။
Wikipedia တွင် ငါးလွှာဟု ဖော်ပြထား ပါသည်။ ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် ဖြစ်ပါ၏။
၃ဝ ခန့်မှ ၄၅ ကီလိုမီတာခန့်တွင် အိုဇုန်းဓာတ်ငွေ့ အနည်းငယ်စုနေသော အိုဇုန်းလွှာရှိသည်။
Britannica တွင် ၁၅ မီတာမှ ၃၅ ကီလိုမီတာဟု ပြထားပါသည်။
နေအဖွဲ့အစည်းတွင် ဂြိုဟ် (၉) လုံးဟု ဖော်ပြထားသည်။
နေမိသားစုဝင် ဂြိုဟ်အရေအတွက်ကို (၈) လုံးဟု လက်ခံထားသည်မှာ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ် ကတည်းက ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၉ဝ တွင် ပလူတိုကို ဂြိုဟ်မွှား (dwarf planet) အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး နေမိသားစုဝင် ဂြိုဟ်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် အငြင်းအခုံများ ဖြစ်ခဲ့၏။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်မှစကာ ပလူတို ကို နေမိသားစုမှ ဖယ်ထုတ်ကာ နေမိသားစုတွင် ဂြိုဟ်ကြီး ၈ လုံးသာရှိကြောင်း အားလုံး တညီတညွတ်တည်း လက်ခံခဲ့ကြသည်။
စာလုံးပေါင်းမှားနေပါသည်။ ဂြိုဟ် ဟူသည် ဂြဟ ဟူသည့် ပါဠိစကားပျက်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် စနေဂြိုဟ် စသဖြင့်သာ ဖြစ်ရမည်။ စနေဂြိုလ် ဆိုသည်မှာ အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။
ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ ရီစရာကောင်းရုံ ကလွဲ၍ ဘာအဓိပ္ပာယ်မှ မရှိပါ။
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှာ ယူရေးနပ်ဂြိုဟ်မဟုတ်။ 'နေ' ဖြစ်ပါသည်။
ရမ်းမရေးသင့်။ မိမိကိုယ်မိမိ သေချာစေရပါ မည်။
တနင်္လာဂြိုဟ်မှာ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်မဟုတ်။ 'လ' ဖြစ်ပါသည်။
ဂျူပီတာဂြိုဟ် သိပ်သည်းခြင်း = ၁၈ဝဝ
ဂျူပီတာဂြိုဟ် သိပ်သည်းခြင်း = ၁၃၂၆
မှားပါသည်။ ပလူတို၏ နှိုင်းရအရွယ် အစားမှာ ဝ.၂ ဖြစ်ပါသည်။
၄၊ ၅။ ၂ဝ၁၇၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ်၊ ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပဉ္စမတန်း၊ သင်္ချာ အတွဲ (၁) စာအုပ်
ဘုံဆခွဲကိန်းသည် 80 ဥပမာ (2) တွင် ဘုံဆခွဲကိန်းသည်
ဘုံဆခွဲကိန်းသည် 80 ။ ဥပမာ (2) တွင် ဘုံဆခွဲကိန်းသည်
တစ်ဆက်တည်းရေးထားသဖြင့် နားလည်မှု လွဲမှားနိုင်သည်။
ဥပမာ (1) နှင့် ဥပမာ (2) တွင် အတွက်နှင့်သီအိုရီကို ရောရေးထား သဖြင့် အလွန်ရှုပ်ထွေးနေသည်။
အတွက်သပ်သပ်၊ သီအိုရီသပ်သပ် ခွဲရေးသင့်၏။
ပုံတွင် 'အခြေ' နှင့် 'ထပ်ညွှန်း' စာများ မှာ မြားနှင့်လွဲနေပါသည်။
စာများကို မြားမြီးတည့်တည့်ရောက်အောင် ရွှေ့ပေးပါ။
ဥပမာ (2) အတွက်နှင့် နောက်တစ်ပိုဒ် စာသားမှာ ဆက်နေ၍ ခေါင်းစဉ်ပြောင်း လို့ ပြောင်းမှန်းတောင်မသိရ။
အကြောင်းအရာအသစ်ကို စာကြောင်း ခွဲရေးသင့်၏။
ဒုတိယ ပုစ္ဆာနှင့် တတိယပုစ္ဆာမှာ (a), (b) ဖြစ်နေသည်။
(b), (c) ဖြစ်ရမည်။
နံပါတ် 8. သည် ဥပမာ (4), (b) နှင့် အတူတူဖြစ်နေသည်။
(a) C ၏ ဝေစု+B ၏ ဝေစု
(a) A ၏ ဝေစု+B ၏ ဝေစု
A အစား C ဟု ဖော်ပြထားသည်။
လေ့ကျင့်ခန်း (4.9), နံပါတ် 6.
မူလထည့်ခဲ့သော လောင်စာ၏ ကို သုံးလိုက်ရသည်။
234 . 6701
0 . 0073
(ပိုင်းခြေ 100 ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း)
(ပိုင်းခြေ 1000 ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း)
လေ့ကျင့်ခန်း (4.15), နံပါတ် (7)
1 မီတာ = 39.39 လက်မ
1 မီတာ = 39.37 လက်မ
Unit convertion မှား
စားကိန်းများ အထက်အောက် မညီပါ။
စားခြင်းကို စာမျက်နှာ ၁ဝ၁ နှင့် ၁ဝ၂ ကို ခွရေးထားသည်။
အလွန်အင်မတန်မှ မသင့်တော်ပါ။ စာမျက်နှာ တစ်ဖက်တည်းတွင်သာ ဖြစ်သင့်သည်။
ဥပမာ (2) (c)
လေ့ကျင့်ခန်း (5.2), နံပါတ် 5.
1 cm လျှင် 100 mm (1:10000)
1 cm လျှင် 100 m (1:10000)
m ကို mm ဟု မှားရေးထားသည်။
ပုစ္ဆာနံပါတ် 4. တွင် ပုစ္ဆာနံပါတ်မပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း (5.6), (vii)
65 ၏ 48%
ရည်ညွှန်းဇယားတွင် 48% မပါပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း (5.10), 7.
မိုးရေချိန်တို့ကို မီတာဖြင့် ပြထားသည်။ 56, 66, 79, 91, 100
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဤမျှရွာသောမိုးဟူ၍ တစ်ခါမှ မပေါ်စဖူးသေးပါ။
မိုးရေချိန် (လက်မ) သာ ဖြစ်ရပါမည်။
ပုစ္ဆာ 1 မှ 16 အထိ
ပုစ္ဆာ 1 မှ 11 အထိ
လေ့ကျင့်ခန်း (6.1), 5.
ပုံတွင် မျဉ်း PQ ၏တစ်ဖက်မှာ p ဖြစ်နေပါသည်။
အဖေ့အသက်၏ လေးပုံသုံးပုံသည် သား၏အသက် ၁၅ နှစ်နှင့်တူညီ၏။
ဤပုစ္ဆာတွင် အဖေ၏အသက်မှာ ၂ဝ ဖြစ်ပြီး သား၏ အသက်မှာ ၁၅ နှစ် ဖြစ်လေရာ အလွန်ရီစရာကောင်းသည့် ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ် ဖြစ်လေသည်။
လေ့ကျင့်ခန်း (8.1), 1. (b)
G နှင့် L ကို 3:2 နှင့် ပိုင်းထား
G နှင့် J ကို 3:2 နှင့် ပိုင်းထား
L နှင့် J ကိုမှားယွင်းဖော်ပြ
ပုံတွင် ကော်လံမှ 1,2,3,4, စသည့် ဂဏန်းများနှင့် အလျားလိုက်မျဉ်းများမှာ လွဲနေပါသည်။ မကိုက်ညီပါ။
ဥပမာ (2)၊ ပုံ (9.14)
ပုံတွင် 1,2,3,4, စသည့် ဂဏန်းများနှင့် ဒေါင်လိုက်မျဉ်းများမှာ လွဲနေပါသည်။ မညီပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း (9.2), 2.
ဂရပ်တွင် ဂဏန်းများ ဖော်ပြမထားပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း (9.2), 3.
ဂရပ်တွင် လနာမည်များ ဖော်ပြမထားပါ။
meter ဟု ရေးလိုပါက အားလုံး meter ဖြင့်သာ ရေးသင့်၏။ metre ဟု ရေးလိုလျှင် အားလုံးကို metre ဟုသာ ရေးသင့်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်နှင့် အမေရိကန်ကိုရောပြီး ကပြား မသုံးနှုန်းသင့်ပါ။
Decametre, အတိုဖြင့် dkm
Decametre ၏ အတိုကောက် အသုံးအနှုန်းမှာ dam ဖြစ်ပါသည်။
လေ့ကျင့်ခန်း (10.3), 4.
လေ့ကျင့်ခန်း (10.3), 8.
3 အလေးချိန်ရှိသော ဆိတ်သားကို လူ 25 ဦးအား အညီအမျှ ဝေပေး
အလွန်ရီစရာကောင်းသည့် ပုစ္ဆာဖြစ်၏။ လက်တွေ့ဘဝနှင့် လွန်စွာမှ ကင်းကွာလှပေသည်။ ထိုပမာဏရှိသောဆိတ်သားကို ထိုလူများအားဝေပေးပါက တစ်ဦးလျှင် ဆိတ်သား တစ်ကိုက်စာသာ ရပေလိမ့်မည်။
လေ့ကျင့်ခန်း (10.3), 10.
လိမ္မော်သီးအလုံး 100 သည် 150 kg လေးသော်
အလွန်ရီစရာကောင်းသည့် ပုစ္ဆာဖြစ်၏။ လက်တွေ့ဘဝနှင့် လွန်စွာမှ ကင်းကွာလှပေသည်။ ထိုမျှကြီးသည့် လိမ္မော်သီးမျိုး ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် မပေါ်ဖူးသေးဟု ထင်ပါသည်။
လေ့ကျင့်ခန်း (10.3), 11.
50 kg လေးသော ပန်းသီးသေတ္တာ
အလွန်ရီစရာကောင်းသည့် ပုစ္ဆာဖြစ်၏။ လက်တွေ့ဘဝနှင့် လွန်စွာမှ ကင်းကွာလှပေသည်။ ဤမျှလေးသည့် ပန်းသီးသေတ္တာမျိုး လက်တွေ့တွင် မရှိနိုင်ပါ။
2500 x = 24750 ကျပ်
2500 x = 13750 ကျပ်
အပိုင်း (၂) သို့ဆက်ရန်